Mpandika teny misongadina: Sarah Standish · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Shams Ahmad
Voadika ny 15 Janoary 2011 14:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, 繁體中文, 简体中文, عربي
Sarah Standish: Mpitoraka bilaogy manana ny anto-draharahany
Tanora Amerikana mpampianatra sy mpitoraka bilaogy manana anton-draharaha i Sarah Standish. Ankoatry ny fampianarany ny teny Arabo ireo mpianatra eny amin'ny kolejy any Etazonia, manantena ity mpikambana ao amin'ny Lingua Arabo ity fa hanangana tetezana eo amin'ny Andrefana sy Atsinanana ary hampisy fifankahazoana bebe kokoa ny fomba fiainana Arabo sy ny fisainany. Tena gaga aho rehefa namaky ny mombamomba azy, ary mbola gaga kokoa rehefa niresaka taminy ary ity no fizotran'ilay resadresaka.
Misy ifandraisany amin'ny fanaovan-gazety ve ny asanao fototra?
Tsy dia misy loatra. Mampianatra teny Arabo ireo mpianatra any amin'ny kolejy any amin'ny Etazonia aho.
Oviana sy naninona ianao no nanomboka nitoraka bilaogy?
Nanomboka nitoraka bilaogy aho rehefa nandeha nianatra tany Syria satria dia efa nanaraka ireo mpitoraka bilaogy Syriana maro aho talohan'ny nialako, izay nanome faharisihina ahy hitoraka bilaogy, ary satria koa nitady làlana mora hahafahako mifandray amin'ny fianakaviako aho, ny namako, ary ireo mpifandray amiko nijanona an-tanindrazana. Ny sasany tamin'izy ireo dia faly be tamin'ny fandehanako, ny sasany kosa dia nanontany tena ny amin'ny fiarovana ahy, ary ny sasany dia tsy mahalala firy mikasika ny Afovoany Atsinanana akory mba hanànany fahafahana mitsara. Amin'ireo tranga rehetra, te-hampiseho azy ireo aho, na dia kely fotsiny aza, ny zava-nisy tamin'izaho nipetraka tany Syria.
Ahoana no nahafantaranao ny Global Voices Online ary inona no nahasarika anao tamin'izany?
Ny nahalalako voalohany ny Global Voices dia tamin'izaho nanoratra taratasy mikasika ireo mpitoraka bilaogy Syriana tany amin'ny kolejy. Toa nahatsiaro niroboka lalina tanatina bilaogy tsy dia misy aingam-panahy aho raha nikaroka lahatsoratra tsara hatao, noho izany dia tsara ny nahalalako fa misy vohikala iray natokana hahatonga ny tontolon'ny bilaogy ho mora takatry ny vahoaka sy manampy azy ireo hahita ny zavatra tsara hovakiana. Tiako ihany koa ny fananganan'ny GV vazivazy izay tsy fanaon'ireo fikambanana na vohikala hafa fantatro. Nanomboka nanoratra ho an'ny GV aho taorian'ny nahafantarako mpamoaka iray ao amin'ny Lingua Arabo, izay lasa namako tany Syria, nanontany ahy raha mety liana amin'ny fandikan-teny ho an'ny Lingua Arabo aho.
Inona no toa nahaliana be anao tamin'ny teny Arabo?
Efa hatramin'izay aho no tia ireo karazana fiteny, na ny tenindrazako izany na ny an'ny hafa. Nanomboka nianatra ny teny Arabo aho noho ny haingitraingitra tamin'ny Anjerimanontolo ary nahita aho fa tiako ny fifaninanana amina fiteny sarotra tahaka izany, ankoatran'ny fahalianako amin'ny fahalalana bebe kokoa ny Afovoany Atsinanana . Rehefa nandeha teny ny fotoana, dia lasa tia ny fahamarinana saro-takarin'ny fiteny ofisialy, sy ny fahalefahana'ny famoronany aho tetsy andaniny. Mihevitra aho fa ny fianarana ny teny Arabo sy ny mikasika ny Afovoany Atsinanana dia mila fanetren-tena–arakaraky ny hahalalako bebe kokoa mikasika azy ireo, no mampiseho ahy fa maro ireo zavatra tsy fantatro tamin'izany–ary mbola mitetra ho tsy fantatro.
Koa satria ianao toa liana dia liana amin'ny tontolon'ny Arabo, mihevitra ve ianao fa misy fiantraikany eo amin'ny fiainanao amin'ny maha olom-pirenena Amerikanina anao izany?
Eny, amin'ny fomba maro samihafa. Ny fihaonana amin'ireo olona any Afovoany Atsinanana izay voakasika mivantana na tsia amin'ny politika ivelany Amerikana dia nampahafantatra ahy ny sanda mahatsiravin'ny olombelona amin'ireo politika ireo indraindray. Amin'ny lafiny iray, dia lasa nifantoka bebe kokoa tamin'ireo sampan-draharaham-panjakan'ny governemanta Amerikana aho, ho an'ireo tsy fahombiazany sy ny tsy fahamarinany, mihoatra noho ny taloha. Mihevitra ihany koa aho fa ny fandehanana any Afovoany Atsinanana dia nampiseho ahy ny hevitra fonosin'ny maha olom-pirenena Amerikana, ahoana ny sombiny kely amin'ny fahefana sy fahafahana Amerikana no miraikitra amin'ny olom-pirenena tsirairay sy manaraka antsika erak'izao tontolo izao, na tiantsika izany na tsia. Ny maha olom-pirenena Amerikana dia midika fa afaka mandingana ireo sisin-tany aho, mitsidika firenena izay tiana, amin'ny fomba izay tsy afaka ataon'ireo olom-pirenena hafa. Midika izany fa mety hanana ireo fahafahana any amin'ireo firenena hafa aho izay tsy hananan'ireo olom-pirenena ao amin'io firenena io akory; ny fitsikerana ny fitondrana firenena iray any Afovoany Atsinanana dia mety hahavoaroaka ahy fotsiny fa tsy hampigadra ahy. Ary farany, manana fahalalahana sy fahafahana ara-bola aho hialako amin'ny tany notsidihiko. Mety tsy dia hamaritra tsara ny maha olom-pirenena Amerikana izany, fa ho ahy, nahazoako sarisary ny amin'ny fanomezan'ny fiaviako fahafahana izay tsy dia hananako zo, na tokony hananan'ny olona tsirairay avy ihany koa.
Inona araka izany no tianao kokoa, ny maha mpampianatra sa ny maha mpitoraka bilaogy anao?
Sarotra ny mampitaha azy ireo amiko satria ny fampianarana dia asa sy fivoarana ary ny fitorahana bilaogy kosa dia tokony ho fialam-boly. Ekeko fa mitovitovy izy ireo, amin'izany dia samy mila fiezahana hamoaka hevitra amin'ny fomba ahafahana manaiky azy ireny sy morah ahazoan'ireo olona hafa azy, ary amin'ireo zavatra roa ireo dia samy tsy azonao antoka ny fahazoanao ampahany amin'ny mpijery sy mpamaky!
Afaka manambara aminay ny traikefanao nandritra ilay fihaonan'ny GV tany Chili farany teo ve ianao?
Nampilendalenda ahy ny haavon'ny demokrasia sy ny fisokafan'ny GV. Fantatro fa misy ny olona sasany mihevitra fa tsy dia misokatra be sy demokratika tahaka ny taloha intsony izany, kanefa raha oharina amin'ireo fikambanana hafa, mihevitra aho fa mbola be ny zavatra azo raisina ho modely. Ary mazava ho azy, nahafinaritra ny nihaona tamin'olona maro mivantana izay nifandray tamiko amin'ny aterineto fotsiny taloha!
Ahoana ny fahitanao ny tenanao afaka 10 taona?
Oay, fanontaniana tsara izany. Tsy dia azoko antoka loatra! Raha manam-bitana aho dia haiko ny hampiakatra ireo mpianatra any amin'ny kolejy amina dingana avo amin'ny teny Arabo ao anatin'ny efa-taona. Raha manam-bitana aho dia ho anatin'ireo mpampianatra vitsy ny teny Arabo kanefa vao misandratra te-hampiditra ny tenim-paritra Arabo ao amin'ny fampianarana ny Arabo maoderna (ny endri-panoratana ny teny izay nampianarina nanerana ny tany Etazonia). Ary aorian'izany, tsy azoko antoka loatra izay hataoko!
Farany, inona ny teny tianao atolotra ny GV?
Te-hiteny aho fa manana zavatra maro hatolotra ny GV satria izy dia tena manao zavatra izay vitsy amin'ireo vohikala no manao azy : mameno akany tokana izy ary manao izany amina fomba miavaka. Manantena ihany koa aho fa hitohy ho demokratika hatrany izy ary hisokatra tahaka izany mandritra ireo taona ho avy, na mihoatra noho izany, ary ho afaka mamoaka ny hevitr'ireo mpitoraka bilaogy amin'ny fomba tena mahavariana ka hahafahan'olona maro noho ny taloha mamaky azy ireny.
Farany, te-hisaotra an'i Sarah ao tamin'ny fanampiany sy ny ezaka vitany.